ဖုန်းဘက်ထရီကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းခံနိုင်ရည်ပေးနိုင်တဲ့ - DU Battery Saver&Phone Charger 4.0.5 Latest APK 100 % Safe - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Tools Apps > ဖုန်းဘက်ထရီကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းခံနိုင်ရည်ပေးနိုင်တဲ့ - DU Battery Saver&Phone Charger 4.0.5 Latest APK 100 % Safe
ဖုန်းဘက်ထရီကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းခံနိုင်ရည်ပေးနိုင်တဲ့ - DU Battery Saver&Phone Charger 4.0.5 Latest APK 100 % Safe
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 11:16 PM Android Battery Apk, Tools Apps
March 16 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Android ဖုန်း tablet ဖုန်းတွေမှာBattery အတွက် အကောင်းဆုံးတာရှည်ခံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ DU Battery Saver နောက်ဆုံးထွက် update အသစ်လေးရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်းလေးကတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ ဘက်ထ၇ီကို အကောင်းဆုံး save လုပ်ပေးပြီး ဖုန်းရဲ့ Background tasks cleaning system ပါရှိတာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်သွားတဲ့ Battery Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Switch ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ အသုံးပြုနိုင်တာကို တွေ့ရှိရမှာပါ မိမိဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်က apps၊hardwareတွရဲ့ running ပုံစံပါပြပေးထားမှာ ဖြစ်သလို မလိုအပ်ပဲ run နေတဲ့ apps တွေကို ရှင်းလင်းရပ်တန့်ဖို့ optimize စနစ်ကို phone ရဲ့ home screen မှာ auto တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ‘ဒါအပြင် ဖုန်းရဲ့ status bar ပေါ်က power icon style ကိုလည်း ကြိုက်သလိုိရွေးချယ်နိုင်ဖို့ Themes များထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် ။
ဒီကောင်လေးရဲ့ဗားရှန်းကတော့ 4.0.5 ရှိပြီး ၊ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 6.0 MB သာရှိပါတယ် Android Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
► Better Battery Details: View your phone's battery power level bypercentage or by time remaining;
► Widget Included: Our "Task Killer" widget will optimize yourpower consumption conveniently. The 4x1 widget makes it easier tomanage Wifi, Data, Brightness, etc, and set power savingmodes.
solidfile ၊ filescdn
ဖုန်းဘက်ထရီကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းခံနိုင်ရည်ပေးနိုင်တဲ့ - DU Battery Saver&Phone Charger 4.0.5 Latest APK 100 % Safe Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:16 PM Rating:5March 16 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Android ဖုန်း tablet ဖုန်းတွေမှာBattery အတွက် အကောင်းဆုံးတာရှည်ခံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ DU Battery Save...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:16 PM